Madaxweynaha Maxaa Daba Dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. – Kismaayo24 News Agency
Madaxweynaha Maxaa Daba Dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Breaking News English News Maqaalo iyo Warar Somali News Top News
by admin 9th February 2018 0227
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ahaa mushixiintii xilka madaxweynaha kula tartamay madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa su’aalo badan ka keenay jawaabtii uu Farmaajo ka bixiyey dhiibistii Qalbi-dhagax.
Wuxuu sheegay inay isweydiin mudan tahay sababta uu Madaxweyne Farmaajo u ogolaaday inuu lix bilood kadib ka hadlo kiiska Qalbi-Dhagax..? wuxuuna intaas ku daray in Madaxweynuhu taageeray go’aankii Baarlamaanka ka qaatay dhiibista Qalbi-Dhagax, iyadoo Baarlamaanku go’aamiyay in Qalbidhagax uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, dhiibistiisana ay ahayd sharci daro, Hay’ada sirdoonkana ay xog aan sugnayn siiyeen Madaxda dalka. Waxay kaloo sheegeen in aysan ONLF Urur argagexiso ahayn.
C/raxmaan C/shakuur ayaa soo xigta in Xukuumadda ayaa difaacday go’aanka dhiibista Qalbidhagax, iyadoo sheegtay inuu sharci ahaa, ONLF ku tilmaamtay urur aragagixiso, Qalbidhagax na danbiile. Wuxuuna isweydiiyay shan su’aalood oo kala ah:
3- Muxuu u doortay xiligan in uu ka jawaabo kiiska Qalbi-dhagax?
4- Sidan masuuliyad ma kaga haraysaa..?
5- Sow lama oran karo hadii Baarlamaankii iyo Madaxweynihii isku aragti noqdeeen, Maxaa Xukuumada u yaala?.
Madaxweyne Farmaajo oo balan qaaday in uu dib u bilaabayo Wadda hadaladii Soomaliland iyo Soomaaliya
Madaxweyne Waare oo kulan la qaatay Xildhibaanada Dawladda ee Hirshabeele laga soo doortay
Deg Deg:- Qarax Miino Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Ra’isul wasaare kheyre” Sanadkaan sii dhamaanaya ee 2017 Dowladda soomalia wax deyn ah loogama yeelan doono gudaha Dalka”+Sawirro
Booliska Scotland oo shegey in ay heleen qori lagu diley nin Somali ah